कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्, छोरालाई जन्म दिएपछि रक्षा र उनका पति छन् खुशी – Hamro Nepali Samachar
Home/ मनोरंजन/कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्, छोरालाई जन्म दिएपछि रक्षा र उनका पति छन् खुशी
कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्, छोरालाई जन्म दिएपछि रक्षा र उनका पति छन् खुशी
भद्रगोल, सक्किगोनी, लगायतका चर्चित सिरियलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्, छोरालाई जन्मदिएपछि रक्षा र उनका पति छन् खुशीले फुरुगं, सुत्केरी भए पनि रक्षाले छिट्टै फेरी सक्किगोनीमा अभिनय गर्ने भइन्, रक्षालाई यति मोटो रकम दिन जिग्री पाँडे तयार
उक्त बिन्दुबाट माथि उक्लिन सुरु गरेको कारोबार रकमले पुनः २१ कारोबार दिन पछि १६ जेठ २०७८ मा १७ अर्बको नयाँ रेकर्ड बनाएपछि मात्रै रोकियो। त्यसपछि बिस्तारै घट्न थालेको कारोबार रकम दुई दिनमै नौ अर्बमा खुम्चियो तर त्यसपछि भने फेरि कारोबार रकम बढ्न सुरु गर्‍यो। आठ कारोबार दिन पछि बढ्दै गएर गत जेठ ३० गते १९ अर्ब ५५ करोडको रेकर्ड बनाएको हो।
यो नै अहिले सम्मको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको रेकर्ड हो। उक्त रेकर्ड पछि कारोबार रकम लगातार घट्दो क्रममा रहेको थियो। गत बुधवार पाँच अर्बको लाइनमा झरेको कारोबार रकम बिहीबार देखि पुनः बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यस अघि आठ कारोबार दिनमै १९ अर्बको रेकर्ड कायम गरेको कारोबार रकमले यस पटक नयाँ रेकर्ड बनाएर फर्केला वा १३ कारोबारसम्म लगातार घटेको कारोबार रकमले थप समय लगाउला त्यो भने भविष्यले नै बताउला।
बर्षभरिको कारोबारले ट्रेन्डले भने लगानीकर्ता बाहिरिने गरेको देखाउँदैन। बरु दोस्रो बजारमा बढ्दै गएका नयाँ लगानीकर्ताले भने कारोबार रकममा नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउन सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। वर्षको सुरुवातमा दोस्रो बजारमा २५ हजारमा सीमित रहेका लगानीकर्ता यति बेला सात लाखको हाराहारीमा पुगेका छन्।
प्राथमिक बजारमा १७ लाखबाट ३५ लाख नाघी सकेका छन्। शेयर बजारबाट लगानीकर्ता बाहिरिने गरेको भन्ने विश्लेषणलाई बढ्दै गएका लगानीकर्ताको तथ्यङ्कले आधारहीन रहेको देखाउँछ। उनीहरू बाहिरिएको भन्दा पनि कारोबार रकमको नयाँ रेकर्ड पछि लगानीकर्ताले कारोबारमा भने केही सुस्तता देखाउने गरेको कारोबार रकमले प्रस्ट्याउँछ।
तर त्यो सुस्तता भने केही समय पछि पुनः उत्साहमा परिणत हुँदा कारोबार रकमले पुनः नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै लगेको छ। बर्षभरिको कारोबार रकमको ट्रेन्डले नयाँ रेकर्ड पछि चार गुणासम्मले घटेर पनि नयाँ कारोबार रकमको रेकर्ड बनाएको छ।
बर्षभरिको ट्रेन्डमा हरेक कारोबार रकमको नयाँ रेकर्ड केही समय मै टुट्दै आएका छन्। यसले पनि पुनः नयाँ रेकर्ड बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। जुन सम्भावना सार्थक भए केही समय मै कारोबार रकमको नयाँ रेकर्ड बन्ने छ। तर उक्त रेकर्ड तोडिनु अघि नै कारोबार रकममा थप सङ्कुचन आए केही समयको लागि १९ अर्ब ५५ करोडकै रेकर्ड लगानीकर्ताले याद राख्नु पर्ने छ।
अफ्रिकामा बच्चा जन्मियो भने त्यसको दात कस्तो होला ? भाइरल जोडी बिना र सरोजसंग लास्टै रमाइलो हास्दहास्दै मुर्छा परे (भिडियो सहित)
पारस शाह बनेका भरत मनी पौडेललाई देख्ने बित्तिकै किन खुशी हुन्छन सन्तोष पन्त ? खुल्यो तितो सत्य – भिडियो सहित